Taxibe Tana-Ivato : Fiara 53 voasazy, mpiasa 17 tsy mahazo miasa, « licence » 32 isa nosotomina
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → juin → 14 → Taxibe Tana-Ivato : Fiara 53 voasazy, mpiasa 17 tsy mahazo miasa, « licence » 32 isa nosotomina
Redaction Midi Madagasikara 14 juin 2019 4 Commentaires
Vokatra ny tsy fanarahan-dalàna nataon’ireo mpamily « taxibe » amin’ny zotra D mampitohy an’i Vascoss sy Ivato (Tana-Ivato), dia fiara fitateram-bahoaka miisa 53 no voasazy. Raha ny vaovao voaray, dia fiara sy ny mpiasa 17 voasazy tsy mahazo miasa ao anatin’ny telo andro. Mpamily miisa 32 nosotomina ny taratasy fahazoana miasa na « licence », ary nahato tsy mahazo miasa mandritra ny folo andro ny fiara sy ny mpiasa. Saofera efatra kosa no voasitona tanteraka ny taratasy fahazahoan’ny mamily fiara. Angatahin’ny maro ihany koa ny tokony mba hijerena akaiky ny zotram-pitaterana 194, 163 izay mpitaraina tokoa ny maro amin’ny fanarihana an-dalana ny mpandeha.
Jak 14 juin 2019 at 11 h 50 min · Edit
Marina mihitsy ny tokony hijerena ny taxibe ITAOSY,mnampy izany ireo « POLICE » manao fandminna eo AMPSIKA mivoaka ny famonoana omby dia malza manao fanavakavahana ny fiara alefan-drareo rehefa maraina.
jeannine 14 juin 2019 at 11 h 23 min · Edit
Misaotra manao restauration de la discipline fa malaza indiscipliné loatra ny chauffeur eto ami ville de Tana e!!!
Rafaela Be 14 juin 2019 at 10 h 05 min · Edit
Mety ilay fandraisana andraikitra ary misaotra fa tokony ny mpamily sy ny mpanampy azy ihany no tsara saziana fa tsy ny fiara. Tsara jerena akaiky ihany koa ny zotra hafa rehetra indrindra ny 194 sy zotra Itaosy rehetra.
Brandon 14 juin 2019 at 7 h 47 min · Edit
Misaotra tompoko amin’ny fandraisana andraikitra.
Mba mila jerena koa ny taxibe Itaosy sy Analamahitsy fa mampikaikaika ny vahoaka.